Izinkinga ezidalwa amatafula abadayisa eThekwini – Ubukhosi
Home/ Umkhandlu/Izinkinga ezidalwa amatafula abadayisa eThekwini
Isinyokotho ezidalwa ukuhweba ukungahlelekile ezitaladini eThekwini (Isithombe: Ingabadi Media Images/nguBanele Bhengu)
ITHEKU lingelinye lamadolobha amakhulukazi kuleli eliheha izivakashi eziqhamuka emazweni omhlaba nasezwenikazi i-Afrika. Liphinde lidonse abatshalizimali, kusimame nomnotho wezwe ngenxa yolwandle olunechweba elisetshenziswayo ukufaka impahla kuleli eqhamuka kwamanye amazwe. Yize kunjalo kunezikhalo kubahlali abathenga kuleli dolobha ngenxa yokwanda kwamatafula emigwaqeni engaphakathi kuleli dolobha. Lokhu kwenza kugcine sekuncipha indawo yokuhamba nokwenza kuhlezi kuminyene enkabeni yedolobha.
Isimo sokwanda kwamatafula ngaphakathi edolobheni sibukeka sikhula nsuku zonke, njengoba abantu bezozizamela ngokuthengisa izinto ezehlukene. Isimo sokwesweleka kwamathuba emisebenzi yisona esiyimbangela enkulu yalokhu, nakuba kugcina kudale ukuthi idolobha lingabukeki. Babodwa abadayisa izithelo, izimpahla zokugqoka nokunye okuningi. Zikhona izindawo ezihleliwe ukwenza lolu hlobo lwebhizinisi kepha sekukhona ongoma uyayona abafike benkashele eduze nalabo abagunyaziwe ukwenza lo msebenzi, abanezimvume.
Isiminyaminya esidaleka emgwaqeni, ukuphazamiseka kokuhamba kwabantu nezimoto yikho okuvusa izinhlonze kakhulu okudalwa yila matafula abekwe ezindaweni ezingafanelekile. Lokhu kwenza kukhuphuke izinga lokungcola kwedolobha. Izitolo ezinkulu zigcina seziphazamiseka ngokwemvume ezinayo yokudayisa impahla yazo ngenxa yokuthi kuvimbeka abathengi ngenxa yala matafula.
Umphakathi uze uzithole usuxabana nabo abahwebi laba ngoba izimpahla zabo lezi abazidayisayo bazendlala phansi, uma kwenzeka zagxobeka ngephutha kusuka esinamathambo kuxatshwanwa kuze kuthenjiswane nenduku.
Omunye obezihambela edolobheni ongathandanga ukudalulwa ubikele iBAYEDE ukuthi uhambele kuleli dolobha ngempelasonto wathola ukuhlukumezeka emuva kwengxabano abe nayo nomunye wabahwebi emgwaqeni uWest Street osenkambeni yedolobha iTheku. “Bengihamba kulo mgwaqo ngiyongena kwesinye sezitolo, ngephutha ngagxoba impahla ebidayiswa ngenxa yokuthi akungeneki esitolo ngenxa yalezi zimpahla abazidayisayo zendlalwe phansi. Insizwa le ebidayisa ngenkathi kwenzeka lokhu ibe isikhwela idilika kimi ngenhlamba. Ngihlukumezekile ngithukwa phambi kwabantu ngehliswa isithunzi,” kusho lona odonse leli phephandaba ngendlebe ukuba lingalinge lidalule igama lakhe.
ElaboHlanga lihambele kuleli dolobha iTheku ngoLwesibili liyozibonela lokhu okukhalwa ngakho. Imigwaqo ethinteka kakhulu kulokhu yiwo uDr Pixely KaSeme Street (obuwaziwa ngoWest Street) u-Anton Lembede Street (obuwaziwa ngoSmith Street), kanye noVictoria Street, eMakethe. Nangempela lifike lakubona lokhu okukhalwa ngakho, ikakhulukazi uma ukuWest Street njengoba kunzima nokubeka unyawo kungahambeki nokucaca bha ukuthi amatafula yiwona adala lesi siminyaminya. Okunye elikutholile ukuthi bambalwa abantu abanezimvume zokusebenza kulezi zindawo.
Ozul’azayithole bathole ukuthi kunabathile abanezimvume bese bethola abantu ukuthi bakhokhe imali ethile yokuthi benkashele eduze kwabo bedayise, bese kuthi uma kutheleka amaphoyisa oMkhandlu weTheku baqoqe izimpahla zabo bazithukuse phansi kwale mipheme esemthethweni futhi enezimvume zokuhweba. Abomdabu waseNdiya yibona abakanise kule migwaqo bedayisa izinto ezehlukahlukene. Kunezikhalo zokuthi bathola lezi zimvume ngokwenzelela. AboHlanga yibo abazithola sebenkashela emiphemeni ephethwe amaSulumane kanye namaNdiya.
EMakethe kubhuza izimpukane ngenxa yokungcola, kulahlwa imfucuza noma yikuphi, kuchithwa namanzi agcolile onqenqemeni lomgwaqo, babodwa laba bamatende agunda abantu, abanye bayapheka kanti nomculo usho phezulu.
Abanye bangabathandazi bamisa abantu izikokela begila imigilingwane yemilingo, badayisa imithi, izigqabo neziwasho nokunye. Umuntu osuke ehambele leli dolobha kuningi ahlukumezeka ngakho kodwa kungekho angakwenza ngenxa yokuntula ulwazi lokuthi ngabe izikhalo zabo bazozibika kubani.
UMasipala weTheku uyaphefumula kwelokuhweba
Okhulumela uMasipala weTheku uNks uTozi Mthethwa uthe: “UMasipala ubeka eceleni izindawo zohwebo olusakhula emhlabeni kaMasipala endaweni eklanywe njengendawo yokuhweba okusakhula ngokwenqubomgomo yokuhweba ngokunjalo nezizinda zokuhweba.
UMasipala weTheku unoMnyango olawula ukudayisa ngabantu bamabhizinisi asafufusa (Business Support). Lo Mnyango ukhulumisana neminyango efana nowakwaRoads, owakwa-ETA, owakwaParks neminye ukuze kuboniswane ngezindawo zokudayisela.
Amatafula afakwayo abahwebi abakhona babamba iqhaza ekuthatheni isinqumo sohlobo lwetafula okufanele lifakwe ukuze kuhambisane nezidingo zabo kanye nemithetho yoMkhandlu weTheku. Kuye kubhekwe ukuthi ingakanani indawo engasetshenziswa ukufaka amatafula ukuze indawo ehamba umphakathi ingaphazamiseki, ngoba ilungelo lawo nawo umphakathi ukuthi uhambe ngokukhululeka.
Abadayisi kumele babe nezimvume ukuze badayise endaweni yoMkhandlu weTheku.
Izindawo ezidwetshelwe ukudayisa siyazikhangisa uma kukhona izikhala ezingenabantu. Siyakhangisa ephephandabeni loMkhandlu elitholakala mahhala emahhovisi kaMasipala kanye nasemitapweni yolwazi eyakhele iTheku. Lokhu senzela ukuba wonke umuntu akwazi ukusibona isikhangiso ukuze afake isicelo. Iphephandaba leli loMkhandlu (iMetro Ezasegagasini) liphuma kabili ngenyanga.”